Fandriampahalemana :: Tebahin’ny Evekan’i Taolagnaro ny fanakaramana mpanakorontana • AoRaha
Fandriampahalemana Tebahin’ny Evekan’i Taolagnaro ny fanakaramana mpanakorontana
“Fanakorontanana tsotra izao”, hoy ny monsenera Rakotozafy Vincent, Evekan’i Taolagnaro, ny zava-misy momba ny tsy fandriampahalemana any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. Nambarany, teny amin’ny Episcopat Antanimena, omaly, fa: “misy olona komitim-piangonana mitaraina any aminy momba ny fisian’ny mpanao politika manakarama vatandehilahy hanao asan-jiolahy”.
Isan’ireo notantarain’itsy Eveka katôlika itsy ihany koa ny zava-misy ataon’ireo dahalo sy ny mpitandro filaminana any atsimo. “Mifanao fangalapiery ry zareo. Nisy fotoana nandalo tany ny praiminisitra. Nifampiresaka taminy aho, tamin’izay ary nilaza izy fa milamina ny any aminay satria efa misy ireo mpitandro filaminana napetraka any. Ny zavamisy anefa dia any amin’ny toerana tsy misy mpitandro filaminana ireo dahalo no manao ny ataony ”, hoy izy.
Toa manamafy ny tenin’ ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, teny amin’ny Toby Ratsimandrava momba ny antony mampirongatra ny tsy fandriampahalemana, tamin’ ny 3 novambra lasa teo, io tenin’ny Eveka ao amin’ny diosezin’i Taolagnaro io. « Raha mandinika isika, dia amin’ny vanim-potoana manakaiky fifidianana toy izao hatrany no mirongatra ny tsy fandriampahalemana eto amintsika », hoy izy. Nataony ohatra ny fanononan’ireo jiolahy mpanafika anaran’olona mandritra ny asa ratsiny. Andrasana ny fandraisana fepetra manoloana ny tranga tahaka izany raha tena voaporofo tokoa.